Individual Lending Loan Officer (Yangon, Bago, Kayin, Mon) – Early Dawn Microfinance
Individual Lending Loan Officer (Yangon, Bago, Kayin, Mon)
Yangon, Bago, Mon, Kayin
Early Dawn Microfinance Company သည် လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းရှိ ဌာနခွဲပေါင်း ၆၈ ခုတွင် အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း ၂၅၀,၀၀၀ ကျော်ကို ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ အောင်မြင်နေသော အသေးစားငွေစု၊ ငွေချေး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့ အဖွဲ့အစည်းသည် ဝန်ထမ်းပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်နှင့်အတူ မြန်ဆန်စွာ ဖွံဖြိုးတိုးတက်လျက်ရှိပြီး မြို့နယ်အသစ်များ တိုးချဲ့ရန် ထူးချွန်ထက်မြတ်သော ဝန်ထမ်းအင်အားများ ဖြည့်တင်းရန် လိုအပ်နေပါသည်။ DAWN သည် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားရှိပြီး၊ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ အသိအမှတ်ပြုလိုင်စင်ရရှိထားသော အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ချေးငွေ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။
Job Title : Individual Lending Loan Officer (IL Loan Officer)
Location : Zone 1 (Yangon Division, Bago Division, Kayin State and Mon State)
Number of Positions : 9
Type of Contract : Open
Reports to : Individual Lending Supervisor
Prospect, promote, identify and recruit potential clients for DAWN´s Individual Lending Unit. Conduct financial appraisal of business, follow-up clients in arrears and provision of strong customer service. Build and maintainahealthy portfolio of individual loans.
ဤရာထူးသည် DAWN ၏ တစ်ဦးချင်းချေးငွေဌာနအတွက် အလားအလာရှိသော ချေးငွေယူမည့်သူများကို
ရှာဖွေစုဆောင်းရရှိရေး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာစစ်တမ်းကောက်ယူရရှိရေး၊ ချေးငွေများထုတ်ပေးရန်နှင့်
ပြန်လည်ကောက်ခံရေး၊ ပြည့်ဝသော ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရေး၊ တစ်ဦးအလိုက် ချေးငွေအရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်ထားသော လစဉ် နှင့် နှစ်စဉ် လျာထားချက်များ ပြည့်မီရေးအတွက် တာဝန်ရှိသည်။
– Conduct promotional activities and identify potential clients of the specific market segment for the Individual Lending Unit in his/her sales territory.
သတ်မှတ်ထားသော နယ်မြေဒေသအတွင်း တစ်ဦးချင်းချေးငွေဌာနအတွက် ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် တိကျခိုင်မာသော ဈေးကွက်အတွင်းရှိ အလားအလာရှိသော ချေးငွေယူမည့်သူများ ရှာဖွေစုဆောင်းရရှိရေး။
– Ensure data and information in loan applications is accurate and of acceptable quality, and ensure also authenticity of documentation.
ချေးငွေလျောက်လွှာတွင် မှန်ကန်တိကျမှုရှိပြီး လက်ခံနိုင်စွမ်းရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ ကောက်ခံရရှိနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် စာရွက်စာတမ်းများ မှန်ကန်မှု ရှိ/ မရှိ သေချာစွာ စစ်ဆေးကောက်ယူခြင်း။
– Conduct site visits and reference checks at and around client’s business premises to verify business operations.
ငွေချေးသူ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို အတည်ပြုစစ်တမ်းကောက်ယူနိုင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းပရဝဏ် နှင့် အနီးတဝိုက်တွင် သွားရောက်လည်ပတ် စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း။
– Conduct home verification visits and reference checks to verify the residency of potential customers.
အလားအလာရှိသော ငွေချေးသူ၏ နေအိမ်သို့ သွားရောက်၍ ၎င်းပေးအပ်ထားသည့် အိမ်ထောင်စုပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းစာရင်း အသေးစိတ်ကို စစ်ဆေးခြင်း။
– Evaluate the willingness and capacity to repay of new and existing clients following DAWN’s loan evaluation methodology.
DAWN မှချမှတ်ထားသော နည်းလမ်းအတိုင်း ချေးငွေယူသူ အသစ် နှင့် အဟောင်းတို့၏ ပြန်ဆပ်လိုစိတ် နှင့် ပြန်ဆပ်နိုင်စွမ်းများကို ချင့်ချိန်ခန့်မှန်နိုင်ခြင်း။
– Participate in credit committees presenting loan recommendations for approval.
ချေးငွေခွင့်ပြုရန် အတွက် ချေးငွေစီစစ် အကဲဖြတ်အဖွဲ့နှင့်အတူ ဆွေးနွေးထောက်ခံခြင်းများတွင်လည်း ပါဝင်ခြင်း။
– Develop business relationship with clients to support their business success and cultivate loyalty to DAWN.
– ငွေချေးသူများ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ကူညီပံ့ပိုးနိုင်ရန်အတွက် ငွေချေးသူများနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ခြင်း။
– Monitor client’s business progress to identify any potential problems.
ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ပြဿနာများကို သိရှိနိုင်ရန် ငွေချေးသူ၏ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုကို စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်း။
– Manage and recover late payments according to institutional procedures.
အဖွဲ့အစည်း၏ ချက်မှတ်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်အညီ ငွေနောက်ကျမှု ပြဿနာကိုင်တွင်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း။
– Assist to IL Manager to achieve targeted result regarding active borrowers and outstanding loan portfolio of branch
ဌာနမှ ချမှတ်ထားသော လျာထားချက်များဖြစ်သည့် ချေးငွေယူသူများ၊ ထုတ်ချေးမည့် ငွေပမာတိုးမြှင့်နိုင်ခြင်းများ ပြည့်မှီနိုင်ရန် အတွက် မန်နေဂျာအား ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ခြင်း။
– Perform other tasks as assigned by supervisor.
ကြီးကြပ်သူ၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တစ်ခြားသော တာဝန်များ ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း။
· Myanmar national.
· Any Bachelor Degree Holder (Degree in finance, economics, accounting or similar field is preferable)
· တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ ( စီပွားရေး (သို့) ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲရေး (သို့) စာရင်းအင်းတို့ နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သော ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသူဦးစားပေးမည်။)
· One year working experience as loan officer in microfinance or similar position in retail banking or sales is preferable.
· ချေးငွေ အရာရှိရာထူးဖြင့် အနည်းဆုံး တစ်နှစ် အတွေ့အကြုံရှိသူ (သို့) ဘဏ် သို့မဟုတ် အရောင်းပိုင်းတွင် အလားတူ ရာထူးမျိုးဖြင့် လုပ်ကိုင်ဖူးသူ ဦးစားပေးမည်။
· Excellent service and communication skills.
· ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်စွမ်း အထူးကောင်းမွန်ရမည်။
· Computer proficiency in word processing and spreadsheets.
· ကွန်ပြူတာကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
· Strong financial analysis skills.
· ငွေကြေးနှင့်သက်ဆိုင်သော စီစစ်တွက်ချက်မှုများ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ရမည်။
· Strong intuition; able to assess character of potential clients.
· အလားအလာရှိသော ငွေချေးသူ၏ စရိုက်လက္ခဏာများကို လေ့လာအကဲဖြဖတ်နိုင်စွမ်းရှိရမည်။
· Willingness to work in low-income neighborhoods and spend long time in the field.
· လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်အရ ဆင်ခြေဖုံး ရပ်ကွက်များအတွင်း အချိန်ကြာမြင့်စွာ သွားရောက်လုပ်ကိုင်လိုစိတ် ရှိရမည်။
Interested and qualified candidates are requested to send an Application Letter, Curriculum Vitae to: jobs@mig.dawn.com.mm or Human Resources Department, No.587, 3rd Floor, The Regency Offices, Pyay Road, 2nd Ward, Kamayut Township, Yangon not later than5P.M. 30th, June 2022 (Thursday).
Note: Candidates are also requested to mention in the applications if there is, blood/marriage relationships with the existing DAWN employees and please identify two reference persons. No requirement of photo or copy of certificates and only short-listed candidates will be contacted.
To apply for this job email your details to webadmin@mig.dawn.com.mm
No. 587, 3rd Floor, Pyay Road,2Ward, Kamayut Township, Yangon 11041
Hotline: +959444 5555 40 / 41
Career Enquiries: +959973 556 961